Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → janvier → 8 → Toliara : Kandidà depiote mamo, nidaroka mpanao gazetin’ny TVM
Tsy mety fay ary misy mpanao politika sasany tsy maty voalavo an-kibo mihitsy tsy mahazaka resy. Ny asabotsy hariva teo tokony ho tamin’ny 5 ora dia notafihana kandidà depiote Toliara I iray, izay tsy lany tamin’ny fifidianana farany teo iny, niaraka tamin’ny namany teo imasom-bahoaka sy ny mpiara-miasa aminy, tao amin’ny toeram-piasany, ny namana Mpanao gazety ao amin’ny Radio Televiziona Soatalily (RNM/TVM Toliara), Siely Landernaux.
Raha ny fanazavan’ity mpanao gazety ity dia mamo ity kandidà solombavambahoaka naloan’ny vahoaka ity. « Tsy nisy ny fanazavana sy alaharo fa dia daroka sy vono no nihatra tamiko ». « Tsy fantatro mazava ny antony, fa tsilian-tsofina no nahalalako fa resaka tsiloa-body avy amina vehivavy iray miasa ao amin’ny « Région » no fototry ny olana », hoy Siely nanamafy tamin’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety. Nomarihany Siely fa « niditra an-keriny tao amin’ny Radio Soatalily ity kandidà mamo ity ary novakiany ny varavarana rehefa nohidin’ny mpiambina ».
Ny fihetsika tsy voahevitra mihoa-pefy tsy tan-dalàna toy izao no mandratsy endrika an’i Toliara indraindray. « Manameloka izao fihetsika famonoana mpanao gazety manatanteraka ny asany izao ny Fikamban’ny Mpanao gazety Faritra Atsimo Andrefana ary nampitandrina ireo mpihoa-pefy fa tany misy lalàna i Toliara », hoy ny fanambaran’ny FMGFAA. Efa nitondra ny raharaha any amin’ny antanan-tohatra samihafa ity Fikambanana ity, ka ho hita eo ny tohiny sy ny akony. Tsiahivina fa efa mpanao gazety roa izay no nisy nidaroka sy namono tao amin’ny Radio Televiziona Soatalily Toliara.